TCDD သည်Haydarpaşaဘူတာရုံအဆောက်အအုံပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကြေငြာခဲ့သည် RayHaber | raillynews
[01 / 02 / 2020] ဆမ်ဆန်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာတွင်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးလာလိမ့်မည်	55 Samsun
[01 / 02 / 2020] စွမ်းအင်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်း	06 တူရကီ
[01 / 02 / 2020] Keçiörenကေဘယ်လ်ကြိုးဖြင့်မစီးသောကလေးများအားမနေပါနှင့်။	06 တူရကီ
[01 / 02 / 2020] TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞနှင့်TÜVASAŞဟာမပေါင်းစည်းသင့်ပါဘူး	58 Sivas
[01 / 02 / 2020] မီးရထားလမ်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအရှေ့ပိုင်း Anatolian ပြတ်ရွေ့လိုင်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်	23 Elazig
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်TCDD Haydarpasa ဘူတာရုံအဆောက်အဦပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်. ထုတ်ပြန်ချက်များကိုဖန်ဆင်း
04 / 09 / 2014 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
TCDD Haydarpasa ရထားဘူတာအဆောက်အအုံပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်. ထုတ်ပြန်ချက်များကိုဖန်ဆင်း: မနေ့ကသတင်းစာဖြန့်ချိNuhoğlu Haydarpasa ဘူတာရုံအဆောက်အဦများက Kadikoy မြို့တော်ဝန် Aykut ၏ပွနျလညျထူထောငျအပေါ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
1-ဘယ်လောက်များနှင့်ပညတ်တရားအားဖြင့်သတ်မှတ်ယိမျးမယိုယဉ်ကျေးမှုပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအဘယ်သို့ form မှာပွနျလညျထူထောငျရလိမျ့မညျ။
ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း 2-, အ Haydarpasa ဘူတာရုံအဆောက်အဦစစ်တမ်းလျော်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းစီမံကိန်းများ, အဆောက်အအုံရဲ့မူလဗိသုကာအင်္ဂါရပ်များနှင့်ဖြစ်လာညီကိုပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းရေးခရိုင်ဘုတ်အဖွဲ့အမှတ်5ညွှန်ကြားမှုထံမှလိုအပ်သောခွင့်ပါမစ်ကိုယူ; စီမံကိန်းသည်ဘုတ်အဖွဲ့ကတညီတညွတ်တည်းအတည်ပြုထားသည်။
စီမံကိန်းအတွက် 3- သည်ဟူသောစွပ်စွဲချက် "အပိုဆောင်းဆောက်လုပ်ရေး" ၏Kadıköyမြူနီစီပယ်ဥက္ကဌမတည်ရှိပါဘူး။
4- 2863 အမှတ်ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်မြူနီစီပယ်နှင့်အတူသဘာဝအများနှင့်ဥပဒေရေးရာပုဂ္ဂိုလ်များ, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်အဆင့်မြင့်ကောင်စီများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလိုက်နာဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းနှင့်တည်ထောင်ခြင်း၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး "ဟုအဆိုပါဥပဒေဘာသာရပ်သည်" ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သဘာဝအမွေအနှစ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေဆောင်းပါး xnumx'nc "။ TCDD နှင့်အခြားလူထုအဖွဲ့အစည်းများအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်ကောင်စီလိုက်နာရပေမည်။
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဘုတ်အဖွဲ့Haydarpaşaများအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက် 5- ကလည်း, Kadıköyမြူနီစီပယ်ကိုယ်စားလှယ်များလည်းခွင့်ပြုချက်နှင့်လက်မှတ်ထည့်သွင်းထားပါသည်။
(6 ၏) သည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များတွင် 3- TCDD, ဘူတာရုံရာပေါင်းများစွာနှင့်ရထားလမ်း၏ဗိသုကာအမွေအနှစ်တွေ့ကြုံခံစားဖို့ဘူတာရုံ, စစ်တမ်း, လျော်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းတည်ဆောက်ခြင်းစီမံကိန်းကိုပြင်ဆင်ထားပြီးယင်းနှင့်ဆက်စပ်သောထိန်းသိမ်းရေးကောင်စီများ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူ၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဒီတော့ဝေး, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ဘုတ်အဖွဲ့ကအတည်ပြုတဲ့စီမံကိန်းတွင်ဒေသခံတစ်ဦးကအစိုးရ "ငါသည်သဘောတူ" အဖြစ်ကောင်းစွာမကြုံစဖူးဖြစ်ပါတယ်။
Kayseri မီးရထားအဆောက်အအုံပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် Landscaping
တင်ဒါအသိပေးချက် - Pehlivanköyဘူတာရုံအဆောက်အအုံပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနှင့် Landscaping İle
တင်ဒါကြေငြာချက် - Eskişehir Education Centre ညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန၏အဓိက ၀ န်ဆောင်မှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း…
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Isparta ပွင့်လင်းလေယာဉ်ရုံအဆောက်အအုံပြန်လည်ထူထောင်ရေး
ပာ TCDD လေလံ ပတ်သက်. သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များကိုဖန်ဆင်း
ရှင်းပြချက် Konya တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအတွက်အဆင့်ကိုကူးမတော်တဆမှုနှင့် ပတ်သက်. ခဲ့
ရထားမတော်တဆမှုနှင့် ပတ်သက်. ထုတ်ပြန်ချက်များကိုဖန်ဆင်း TCDD Izmir မှဖြစ်ပွားခဲ့သည်
အဆိုပါတူရကီက Metro ၏စည်းကြပ်
ဒါဟာ Aydin မြို့လယ်ကနေမြို့မီးရထားထဲကရွေ့လျားနေသည်
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ဒီဇင်ဘာလ၌တူရကီမှဖေဖော်ဝါရီလ21922 26
မီးရထားလမ်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအရှေ့ပိုင်း Anatolian ပြတ်ရွေ့လိုင်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်
Akçarayခရီးစဉ်များ4မိနစ်သို့သွားပါ
Eurasia ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းခွန်များသို့ ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းတိုးခြင်း